Fandaharam-pianarana momba ny diplaoma an-tserasera sy azo ekena »Hodges University
Sokajy: Torolàlana an-tserasera
Eo an-tampon'ny lohahevitra amin'ny fanabeazana an-tserasera isika!
Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia fantatsika fa ny fianarana amin'ny tontolon'ny asa be atao sy ny fandaharam-pianakaviana ankehitriny dia mety hahatonga azy ho sarotra ny hiverina any an-tsekoly. Izany no antony nanamboaranay endrika maro tamin'ny fandaharam-pianarana ho an'ny oniversite mba hoentina amin'ny Internet. Ny fahaleovan-tena eo am-pandraisana ny diplaomanao no fomba tsara indrindra hahitanao fahombiazana, ary fantatray izany. Mpianatra olon-dehibe hafa dia nandeha tamin'ny lalana efa noeritreretinao ka nahita ny fahombiazany tamin'ny fandaharam-pianarana an-tserasera Hodges.
Top Programs amin'ny Internet
Tombontsoa amin'ny fanatrehana an'i Hodges U ho an'ny mari-pahaizana an-tserasera na fanamarinana
Satria namolavola ny lalan'ny diplaomanay ho an'ny mpianatra an-tserasera izahay, dia hahita tombony lehibe kokoa noho ny oniversite an-tserasera hafa.
Misy ny profesora hamaly ireo fanontanianao. Oniversite amin'ny serivisy feno izahay manolotra fandaharana nentim-paharazana sy amin'ny Internet. Ny mpampianatra anay dia manolo-tena ho anao hamaly ny fanontanianao sy hanampy anao hahomby. Fanampin'izay, ny mpampianatra antsika dia mihoatra ny fepetra henjana amin'ny fampianarana takiana amin'ny fanekena ny faritra sy ny programa.
Ny programa momba ny diplaomanay dia novolavolaina tanteraka ho an'ny olon-dehibe mianatra. Ny fahafaha-manao isaky ny fandaharana no mampiavaka antsika. Tsy oniversite manolotra fampianarana an-tserasera fotsiny isika. Oniversite manolo-tena amin'ny fahombiazanao izahay.
Tsy hanimba ny kalitao ianao raha te hanana mora. Oniversite an-tserasera eken'ny faritra izahay. Ny fankatoavana isam-paritra dia henjana kokoa ary mitaky valim-panadinan'ny mpianatra mihoatra ny haavon'ny fankatoavana nasionaly. Miaraka amin'ny Hodges U, hahazo fanabeazana tsara kokoa ianao.
Ireo mpampianatra anay dia manana traikefa amin'ny tena izy. Mety hanome anao fahaiza-manao azonao ampiharina amin'ny asanao ankehitriny izy ireo. Atombohy ny fampiasana ny fahaizana ianaranao anio.
Canvas no sehatra an-tserasera ampiasainay amin'ny fandefasana fampianarana an-tserasera, mahatonga ny fifandraisana amin'ny namana sy ny fanohanana fampianarana ho mora azo. Ny fandefasana hafatra eo noho eo, ny ora birao virtoaly ho an'ny mpampianatra, ny lahateny voarakitra ary ny fahaiza-manao amin'ny kaonferansa amin'ny fotoana tena izy dia hita ao amin'ny traikefa amin'ny fianarana an-tserasera ao amin'ny Hodges University.
Manaova fanovana fa hisaotra anao ny tenanao ho avy. Manomboka an-tserasera anio!
Fomba fanaterana mari-pahaizana sy fanamarinana
Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges, maro amin'ireo diplaomanay amin'ny oniversite no misy amin'ny Internet tanteraka. Nanangona lisitr'ireo programa maodera, bakalorea, mpiara-miasa ary fanamarinana izay azo alaina amin'ny Internet izahay, na aiza na aiza misy an'ireo fanjakana 49 izay tompoinay.
Vonona ny hianatra an-tserasera ve ianao?
Ny fianarana an-tserasera dia mitaky fisainana miabo sy fahatapahan-kevitra hahita asa iray hatramin'ny farany. Mino anao izahay ary fantatray fa manana ny ilaina hianaranao amin'ny Internet ianao. Saingy amin'ny fitakiana be loatra amin'ny fotoanao dia ilaina ny miantoka ny fahafantaranao tsara izay tafiditra amin'ny programa an-tserasera. Tsy mora ny mianatra an-tserasera, saingy azo antoka fa safidy ambony io mamela anao hamita ny tanjonao amin'ny fianarana ambony.
Fantaro ny dikan'ny hoe mianatra an-tserasera. Ny fahaleovan-tena no lakilen'ny fianarana an-tserasera. Azonao atao ny mianatra manodidina ny asanao sy ny fandaharam-pianakavianao, amin'ny fotoana anananao mandritra ny fialan-tsasatrao atoandro sy alohan'ny asa na aorian'ny asa. Angamba ho anao, vao maraina na rehefa avy natory ny olon-drehetra. Na inona na inona fandaharam-potoananao, azo atao ny mianatra kilasy an-tserasera. Fampianarana an-tserasera, fampandrenesana, fampivoarana ny teknolojia, simulcast ary fampianarana an-tserasera mivantana dia mety ho hita ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana ambony. Mety hisy koa ny fanamby. Ny fianarana an-tserasera dia mety mitaky fotoana bebe kokoa noho ny fianarana nentim-paharazana (ohatra: kilasy adiny iray misy famelabelarana sy fifanakalozan-kevitra dia mety hanjary fotoana bebe kokoa amin'ny Internet aorian'ny famakianao ilay lahateny sy fanoratanao ireo hevitra nifanaovanao ho an'ny famerenan'ny mpampianatra). Raha toa ka mitaky torolàlana kely avy amin'ny profesora ianao, dia mety ho sarotra kokoa ny mianatra an-tserasera noho ny tontolon'ny fianarana mifangaro. Manolotra fomba maro hianarana izahay; safidio izay mifanaraka aminao.
Toetra mampahomby ireo mianatra an-tserasera ahitanao fahaiza-manao an-tsoratra an-tsoratra tsara, ny fahaizana mamaky sy mahatakatra ny lohahevitra haingana sy mahomby, fahaiza-manao matanjaka matanjaka, ny fahaizana (sy ny faniriana) hiasa tsy miankina tsy misy fanaraha-maso, ary ny fahatsiarovan-tena ampy hahitanao ny làlanao amin'ny ho avy eo am-panaovana ny fandraisana andraikitra voalohany mahareta amin'ny fanamby. Mila manana fahaizana mandahatra fotoana handinihana sy hanaraka ny drafitra natokana ho anao ianao na dia misy zavatra miseho mety hanelingelina anao aza. Aza matahotra raha toa ny sasany amin'ireto fahaiza-manao ireto toa mavesatra. Tonga eto ny mpiasa eto aminay mba hahitan'ny rehetra ny fianarana.
Fahafahana manao fifandraisana tsara amin'ny olona mitovy amin'izany rehefa mianatra an-tserasera. Mora kokoa ny fahombiazana rehefa manana rafi-panohanana tsara ianao hanampy anao amin'ny alàlan'ny programa fianaranao amin'ny Internet. Hiaina fanamby sasantsasany ianao, ary ho mendrika izany ny tsirairay amin'izy ireo rehefa mitazona ny mari-pahaizana ianao. Ny fananana modely tsara sy ny rafitra mpanohana izay afaka manome anao izay rehetra ilainao hahatratra ny tanjonao farany dia mifamatotra amin'ny fahombiazanao. Azonao ity!
Fantaro ny antony manosika anao. Ny antony nanapahanao hevitra hanatrika sekoly an-tserasera dia hisy fiantraikany amin'ny fahaizanao mianatra. Fantaro sy fantaro ny antony manosika anao hisafidy ny hiverina any an-tsekoly ary hianatra amin'ny Internet. Ho an'ny maro, ny fianarana an-tserasera dia mamela azy ireo hanohy hiasa mandritra ny fotoana ilany fianarana ambony mba hahazoany vola bebe kokoa. Ataovy lohalaharana ny antony manosika anao mba hahatadidinao azy rehefa toa mandreraka na mitoto ilay fianarana. Samy hampiasa vola amin'ny tenanao sy ny tenanao amin'ny programa an-tserasera ianao. Ny fotoanao dia iray amin'ireo fampiasam-bola lehibe indrindra azonao. Ny ezaka ataonao amin'ny fianaranao an-tserasera dia hifandray mivantana amin'ny fahombiazanao amin'ny taranja ataonao. Hanao fanoloran-tena ho an'ny tenanao koa ianao. Ny fampiasam-bola amin'ny fanabeazana anao dia hanome anao valiny lehibe kokoa amin'ny farany. Fantatray fa vitanao izany, ary lalina indrindra, ianao koa!
Antsipiriany sy mason-tsivana ho an'ny mpianatra amin'ny Internet
Ny oniversite Hodges dia tsy manavakavaka noho ny volon-koditra, ny loko, ny fivavahana, ny lahy sy ny vavy, ny fironana ara-pananahana, ny fiaviam-pirenena, ny taonany, na ny kilemaina amin'ny fanomezana fotoana mety ho fanabeazana na asa sy tombontsoa azo avy amin'ny asa. Ny mpikambana rehetra ao amin'ny oniversite dia mitovy lanja aminy. Ny oniversite Hodges dia tsy manavakavaka noho ny firaisana ara-nofo na fahasembanana amin'ny fandaharam-pianarana sy ny hetsika ampiasana azy, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny lalàna sy lalàna mifehy ny federaly sy ny fanjakana misy, fa tsy voafetra amin'ny, Lohateny IX an'ny Fanavaozana ny fanabeazana tamin'ny 1972 , Fizarana 504 an'ny lalàna momba ny fanarenana ny taona 1973, ary ny lalàna Amerikanina manana fahasembanana amin'ny taona 1990. Ity politika ity dia miitatra hatrany amin'ny asa amin'ny alàlan'ny fidirana ao amin'ny Hodges University.
Ny fanadihadiana momba ny Lohateny IX dia tokony halefa amin'ny mpandrindra ny lohateny IX:
Kelly Gallagher, mpandrindra ny lohateny IX 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966
Lohateny Fampiofanana IX dia azo alefa Eto.
Ny fangatahana momba ny lalàna Amerikanina manana fahasembanana dia tokony halefa amin'ny mpandrindra ADA:
Josh Carcopa, talen'ny traikefa ananan'ny mpianatra.
Ny fangatahana mailaka dia tokony halefa any amin'ny Fort Myers Campus amin'ity adiresy manaraka ity: University of Hodges, Attn: ADA Coordinator, 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966.
Ny anjerimanontolo dia manan-jo handà ny fidirana amin'ny mpangataka raha toa ka tombony ho an'ny mpangataka na ny oniversite izany hetsika izany. Ny oniversite dia tsy manaiky ireo mpangataka manana faharesen-dahatra na heloka bevava amin'ny fandaharam-pianarana. Ireo mpangataka hafa manana firaketana heloka bevava dia mety mameno ny taratasy fangatahana fangatahana heloka bevava Felony, izay dinihan'ny komity ao amin'ny komitin'ny fiarovana ny oniversite. Ny komity kely, izay fanapahan-kevitra farany, dia hamaritra ny fahafahan'ny kandidà handroso amin'ny fizotry ny fandraisana.
Ny fandraisana andraikitra amin'ny fianarana an-tserasera ao amin'ny anjerimanontolo dia arahi-maso amin'ny fitarihana akademika an'ny sekoly tsirairay avy izay manara-maso ny fampidirana ireo fandaharam-pianarana sy fandaharana an-tserasera miaraka amin'ny fizotran'ny akademika. Ny fampianarana sy programa an-tserasera dia aseho amin'ny alàlan'ny Canvas, ny rafi-pitantanana ny oniversite. Ny mpianatra manao taranja an-tserasera dia takiana mba hahafantatra ny sehatra Canvas alohan'ny hanombohany ny taranja misy azy ireo.
Ny fampianarana amin'ny Internet rehetra ampianarina ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia mety mitaky fanadinana farany. Ny mpianatra dia takiana amin'ny fanadinana farany (mitaky webcam) mandritra ireo daty voatanisa ao amin'ny vavahady MyHUgo. Ny làlana an-tserasera tsirairay dia misy saram-pandraharahana mifandraika amin'izany (azafady jereo ny fandaharam-pianarana sy ny saram-pianarana amin'ny Terms sy Conditions fisoratana anarana).
Fepetra ianarana an-tserasera
Jereo ny Katalaoginay Raha mila fanazavana momba ny fianarana an-tserasera